WordPress: Fikarohana Post mifandraika | Martech Zone
Talata, Janoary 1, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Raha mampiasa WordPress ianao, ny iray amin'ireo plugins ilainao dia ny Related Post plugin. Izany dia nilaza fa tsikaritro fa ny habetsaky ny teny fanalahidy nalefa tamin'ny Daily Reads dia nanodinkodina ny valin'ny Post mifandraika.
Ary koa, tena gaga aho fa ny plugin Related Post dia nanome lisitry ny lahatsoratra mifandraika fotsiny alohan'ny ny lahatsoratra vakinao! Ahoana raha nanova ny sainao ianao (toy ny fanaoko matetika!)… Tsy tokony hanome lahatsoratra navoaka taorian'ny niandohany nefa mbola nifandray ihany koa ve ianao?
Vokatr'izany dia nanao tweaks madinidinika tamin'ny plugin aho. Voalohany, mba hanondroana ireo lahatsoratra na taloha na aorin'ity paositra ity dia novaiko ny andalana 91 avy amin'ny:
. "AND post_date> = '$ izao'" mankany (havaozina: 11/15/2011):. "ARY post_date! = '$ Izao'". "AND post_date <= CURDATE ()"
Faharoa, ny Daily Reads ao amin'ny bilaogiko dia navoakan'ny Del.icio.us ho azy teo ambanin'ny mpanoratra manokana (mba tsy hanovako ny teny miafiko ary hanapahako ny fandefasana mandeha ho azy). Mba hanaovana izany, dia nanisy paramètre query hafa aho hanalana an'io mpanoratra io amin'ireo lahatsoratra notadiavina tamin'ny alàlan'ny fampidirana ity tsipika manaraka ity taorian'ny teo aloha:
. "ARY post_author! = 4"
Nahita ny nomeraon'ny mpanoratra aho tamin'ny alàlan'ny fikarohana azy io tamin'ny mpampiasa ahy. Aleoko tsy manahirana ny raharaha amin'ny fidirana amin'ny latabatra hafa - mety hampihena ny hafainganana anehoana ireo valim-pifidianana ireo sy hampihena ny fotoana lanin'ny entana. Izany dia hitarika ny olona ho sosotra ary hiala.
Ny tombony azo avy amin'ny fampisehoana lahatsoratra mifandraika
Lahatsoratra mifandraika dia fitaovana mahafinaritra ho an'ny bilaogy rehetra. Ny lahatsoratra mifandraika dia manamafy ny valin'ny Search Engine amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny teny lakile amin'ny alàlan'ny rohy, singa iray manan-danja amin'ny algorithman Search Engine.
Ireo lahatsoratra mifandraika dia tsy a Sem fitaovana, na izany aza. Ny lahatsoratra mifandraika dia fitazonana fitazonana hitazonana ireo mpampiasa ao amin'ny tranokalanao. Mety tsy hitany izay notadiaviny tany amin'ny toerana nilatsahany - fa raha manome azy ireo andinin-tsoratra fanampiny ianao dia mety hijanona eo!
Tags: Fatra CPmyreponoLahatsoratra mifandraika
2 Jan 2008 amin'ny 9:23 PM
Fetsy mahafinaritra. Tsy tsapako fa misy ny fampidirana mifandraika amin'ny bilaogy teo alohan'izay… Tsy maintsy manitsy ny plug-in aho. Misaotra an-doha sy torolalana 🙂
… Ary taom-baovao sambatra!
Jan 3, 2008 ao amin'ny 4: 39 AM
Fijerena tsara - na dia mampiasa tenifototra tsotra aza aho manokana ho an'ny lahatsoratra mifandraika mifototra amin'ny tag, fa manaiky tanteraka aho fa ilaina ny lahatsoratra mifandraika.
3 Jan 2008 amin'ny 1:05 PM
wow .. hafetsena milamina io. Na dia tsy manana plug-in mifandraika amin'ny wasabi aza aho dia manana plug-in Tsotra Tsotra ho an'ny lahatsoratra mifandraika ary heveriko fa tsy maintsy mampiasa ny <postdate <condition ihany io. Misaotra amin'ny tendrony, avelao aho hijery ny kaody plug-in ary hahitako raha azoko atao ny manamboatra azy mba hanome valiny tsara kokoa.
3 Jan 2008 amin'ny 7:32 PM
Chandoo, Simple Tags dia tsy mampiasa fepetra aorina - Mino aho fa mamorona mivantana ireo lahatsoratra mifandraika, miaraka amin'ny fijerin'ny pejy tsirairay (raha tsy hoe velomina ny cache). Tsy izany no zavatra mahomby indrindra ho an'ny mpizara, saingy midika izany fa hahazo ny lalao tsara indrindra izy, na efa navoaka alohan'ny na aorian'ny lahatsoratra nojerena.
Doug - azafady fa niresaka lohahevitra kely…
3 Jan 2008 amin'ny 8:02 PM
Tsy misy ahiahy, Stephen! Ry zalahy manana ny fahalianako! Ankehitriny tsy maintsy mandeha mijery ireo Tsotra Tsotra aho!
Jan 5, 2008 ao amin'ny 10: 44 AM
Lahatsoratra tsara! Fa te haka nits vitsivitsy aho.
Ny fanamarinanao ny “(tsy) miditra latabatra hafa”Satria:
"mety hampihena ny hafainganam-pandeha izay aseho ireo valiny ireo ary hampihena ny fotoana lanin'ny entana"
dia offbase ary ohatra amin'ny fanatsarana aloha loatra izay manakana ny fikojakojana, ary mahamenatra ny mahita olona manana mpihaino marobe manolotra izany zavatra izany satria manaparitaka vaovao diso.
Ny SQL manatevin-daharana anao dia miresaka momba anao, raha heverinao fa manana mari-panondro misy antonony dia hampitombo ny fotoana anaovanao valiny amin'ny ankamaroany microseconds. Mila manana fifamoivoizana an-taonina sy taonina ianao alohan'ny hahitan'ny olona iray na dia ny antsasaky ny segondra aza. Eny, raha manery ny tenanao ianao dia afaka manoratra kaody SQL tena mahavariana izay hahavita be, fa ny fidirana fanampiny amin'ny angona keyed dia tsy ohatra amin'izany.
Ary koa, raha tokony hiaro ny fanapahana hack plugin navoakan'ny olona iray, tena tiako ny mahita anao manohana ny fanatsarana azy ary avy eo miasa mba hampiditra ny fanatsaranao ao amin'ilay plugin tena izy. Tahaka izany, mety hahazo coder amateur ianao hampihatra ny fanovana anao ary avy eo manavao ny dikan-plugin vaovao ary mamaha ny fanovana izy ireo fa tsy mahita izay tsy nety. Ny fiovanao dia mahasoa, fahaverezan'ny fampiasa fotsiny, fa ny fanapahana sasany kosa dia mety hiteraka vaky tranokala raha toa ka eo ambonin'ny lohan'ilay hack no ampiasaina ny fanitsiana ny plugin fototra.
JMTCW. Tohizo ny asa tsara raha tsy izany. 🙂
Jan 5, 2008 ao amin'ny 11: 42 AM
Misaotra anao namaly - Tsy azoko antoka fa ekeko izany. Tsy nanatsara aloha aho… raha ny marina dia nahita ny fomba tsara indrindra ahazoana ireo fampiasa rehetra ilaiko aho fa tsy mila manisy fanovana fanampiny. Ao amin'ny bokiko dia tokony ho lasibatry ny mpamorona tsirairay izany.
Izaho koa nilaza an'io afaka misy fiantraikany amin'ny fampisehoana. Tsy nanelingelina ny fanandramana na ny fanandramana aho satria tsy nilaina izany raha ny fomba nanatsara ny plugin. Indray mandeha indray - nahazo 100% ny fampiasa nilaiko aho nefa tsy nanao sonia na nanampy index, sns. Izany no vahaolana mety ao amin'ny bokiko.
Miombon-kevitra aminao aho amin'ny naoty hafa na izany aza. Izaho dia mahomby amin'ny famoahana plugins indray, toa tsy azoko ny asan'ny olon-kafa. Niresaka an'ity bilaogin'ny mpanoratra ity aho tamin'izay - ka angamba ho raisiny ho fiheverana ireo ho famotsorana amin'ny ho avy.
PS: Namboarina ny fanovana! 🙂
5 Jan 2008 amin'ny 12:24 PM
@Douglas: Tsy azoko antoka fa ekeko izany. Tsy nanao fanatsarana mialoha ve aho? Indray mandeha indray - nahazo 100% ny fampiasa nilaiko aho nefa tsy nanao sonia na nanampy index, sns.
Heveriko fa izany no mahasamihafa ny olona mijery fandaharana amin'ny asa tsy lavorary sy ny asa tanana vs. olona iray mpikirakira izay manandrana manatanteraka zavatra iray (ary tsy midika izany hoe manangasanga; amin'ny lisitry ny mailaka sasany no lalaoviko. anjara-taratasy manohitra ny teo aloha. 🙂
Mitovy amin'ny filazan'ny kaonty na mpisolovava amin'ny tompona orinasa izany.Tsy hanao an'izany aho”Sy ny tompona orinasa, tsy mametaka ireo fiovana rehetra izay fantatry ny matihanina ho * mety * tsy hiraharaha ny torohevitr'izy ireo satria toa ezaka be loatra izany, ary miasa eo aloha. Fantatr'Andriamanitra fa izaho dia tompona orinasa taloha ary efa niasa sahady nanohitra ny toro-hevitra rehetra, na dia kely aza ny tombam-bidiko taty aoriana. 🙂
@Douglas: Matetika aho no namoaka plugins indray,…
Tsia, tsy izany no nolazaiko. Ny nolazaiko dia satria loharano misokatra izy io dia azonao atao ny manome ny fanovanao hiverina amin'ny mpanoratra tany am-boalohany dia eken'izy ireo izany, ary azonao atao izany amin'ny alàlan'ny fifandraisana sy ny fanomezana. Izaho dia miasa amin'ny maha consultant marketing sy mpampihatra tranokala ho an'ny mpanonta printy sy fampiasan-dahatsoratra Drupal ho an'ny haitao web, ary ny vondrom-piarahamonina Drupal dia mifandray foana amin'ireo mpanoratra plugin (Drupal dia miantso azy ireo hoe "modules") ary manolo-tanana hanampy amin'ny fanatsarana ny maodelin'ny hafa.
PS Misaotra tamin'ny fanamboarana fanitsiana.
5 Jan 2008 amin'ny 1:37 PM
Hevitra tsara, Mike!
Azoko atao ny misintona ilay plugin hanampiana an'io safidy io "Asehoy fotsiny ny alohan'ny fampisehoana aseho". Heveriko fa ny safidy faharoa dia fananana kely kokoa ho an'ny bilaogiko, saingy hojereko ary ho hitako fa mety hahaliana ny mpanoratra izany.
5 Jan 2008 amin'ny 6:10 PM
@Douglas: heveriko fa ny safidy faharoa dia fananana kely kokoa ho an'ny bilaogiko…
Ie, manaiky aho. Fifanarahana tsara anefa!
Jan 5, 2008 ao amin'ny 10: 45 AM
Aza hadino ny fandefasana ny fanehoan-kevitra teo aloha! Enga anie ianao mba hanana hevitra mialoha! '-)
31 Jan 2008 amin'ny 2:43 PM
Doug - Mety misy zavatra tsy ampy eto. Toa izany
Tsy manakana ny famoahana lahatsoratra vita aorian'io lahatsoratra manokana io tsy ho tafiditra ao, toy ny manakana ny fampidirana lahatsoratra izay mety napetrakao navoaka amin'ny ho avy.
Fanantenana izay misy dikany sy fisaorana amin'ny bilaogy mahafinaritra.
31 Jan 2008 amin'ny 3:56 PM
Tena mahita izany! fa azoko antoka fa hankasitraka ny olona rehetra (izay manoratra mialoha).
Hanavao ny fangatahana amin'ny lahatsoratra aho.
2 Mey 2008 tamin'ny 8:40 hariva
@Mike: Heveriko fa izany no maha samy hafa ny olona mijery fandaharana amin'ny asa mahomby sy ny mpanao asa tanana vs. olona iray mpikirakira fotsiny mitady zavatra vita
Fanavahana mahaliana. Na dia tsara aza ny manana ny zava-drehetra mihazakazaka amin'ny farany tsara indrindra mety hisy, amin'ny tranga maro izay toa tsy mandeha amin'ny laoniny. Miezaka aho mba hahita fifandanjana amin'ny fandaharam-potoako eo anelanelan'ny fomba ahitako zavatra hihazakazahana sy ny ohatrinona $ na fotoana mety hahatongavany any.
Miezaka ny hanao faran'izay kely indrindra ilaina aho hanatanterahana ny tanjona ezahako tratrarina. Ny fandaniana fotoana bebe kokoa dia tsy ho lafo.
Raha fintinina, raha tsy hoe tsikaritra ao amin'ny bilaogiko io fahaverezan-kery io dia tsy handany fotoana fanampiny aho, raha toa ka tsikaritra kokoa izany dia manapa-kevitra aho raha mendrika ny valiny ny fotoana fanampiny. Tsy lavorary foana no vahaolana tsara indrindra.
3 Mey 2008 tamin'ny 4:04 hariva
@Dwayne: Miezaka ny hanao faran'izay kely indrindra vitako aho mba hanatanterahana ny tanjona ezahiko hotratrarina. Ny fandaniana fotoana bebe kokoa dia tsy ho lafo.
Mazava ho azy fa raha manao ny kely indrindra foana dia midika fa tsy mianatra teknika tsara kokoa mahatonga anao hamerina ny kely indrindra im-betsaka amin'ny ho avy fa tsy hamela anao hisoroka izany, dia nanao zava-bita diso ianao. Eny, maro ny asa tsy mila ezaka fanampiny fa nanatri-maso olona maro aho nanao hitsin-dalana toy izao taloha ary izy ireo dia olona vitsy mpamokatra sy / na mpamorona soatoavina kely fantatro (ny sasany tamin'izy ireo dia indrisy fa mpiasako , noho izany antony nahitako ny tsy fahaizan'izy ireo mamokatra.)
@Dwayne: Raha fintinina, raha tsy hoe tsikaritra ao amin'ny bilaogiko io fahaverezan-kery io dia tsy handany fotoana fanampiny aho, raha toa ka tsikaritrao fa tsy manapa-kevitra aho raha mendrika ny valiny ny fotoana fanampiny. Tsy lavorary foana no vahaolana tsara indrindra.
Mieritreritra aho fa diso hevitra ianao. Voalohany dia nilaza aho fa i Doug dia nanatsara ny fahombiazany tsy dia azo tsapain-tanana, fa tsy izaho, fa ny tena zava-dehibe raha toa ka hanao hack iray ianao izay mety hiteraka olana amin'ny fitandremana ny ho avy noho ny fahatsarana dia aza avoaka ho an'ny hafa izany farafaharatsiny farafaharatsiny milaza azy ireo ny karazana olana fitadiavana mety haterak'izy ireo any aoriana.
Ny mahatsikaiky ny hevitrao dia ny fanarahana ny lalana haingana sy mora dia matetika dia mitaky fandaniana fotoana betsaka kokoa aminao amin'ny manaraka rehefa mametraka fanavaozana fiarovana ho an'ny WordPress ianao, mamaha ireo fiasa voajirika ary maniry azy hiverina. Ankehitriny dia manana amnom-boalavo misy fanjaitra tsy hita ianao ary mila mamantatra hoe taiza no nisy ny fanjaitra.
Mandany fotoana fanampiny amin'ny fampisehoana? Bah, amin'ny ankapobeny tsy ilaina. Mandany fotoana fanampiny amin'ny fikojakojana? Eny, mandoa vola matetika izy amin'ny farany.
Fonosina, eny, natioran'olombelona ny fanafoanana ny fampitandremana momba ireo zavatra tsy nampijaly tena akory. Mahatsapa ny fanaintainana indray mandeha ary mety hihaino ireo fampitandremana avy amin'ny hafa izay efa nahatsapa izany fanaintainana izany ianao.
3 Mey 2008 tamin'ny 8:03 hariva
Zavatra iray tokony holazaiko; Heveriko fa ny fanapahana an'i Doug dia mety ho fanampiny tsara amin'ny WordPress, farafaharatsiny ho safidin'ny mpampiasa. Toa hadalana ihany ny mametra ireo lahatsoratra mifandraika amin'ireo izay tonga teo aloha ihany.
Etsy ankilany, te-hangataka amin'i Doug aho mba handefa momba ny famoahana ny lahatsorany isan'andro avy amin'ny del.icio.us; izany dia ho lohahevitra mahaliana.
3 Mey 2008 tamin'ny 8:09 hariva
Miombon-kevitra aminao aho… ary ity ny fomba fanaovana ny lahatsoratra isan'andro avy amin'ny Del.icio.us. Ankafizo!
3 Mey 2008 tamin'ny 8:22 hariva
Heh. Tsara! Mieritreritra aho fa tokony ho nandefa Google ho azy io aloha.
BTW, nandefa mailaka anao manokana aho momba ahy tany Indy 16-19 feb herinandro teo ho eo izay saingy mbola tsy naheno izany. Nahazo ve ianao? (aza misalasala mamafa ity ampahany amin'ny hevitro ity.)
Apr 6, 2008 amin'ny 11: 54 AM
Lahatsoratra tsara, hataoko ilay tweak amin'ny plugin-ko misaotra anao indray!